Karate-Tanà Ville: lany ho filoha vaovao Ramaroson Andry Heriniaina - ewa.mg
Karate-Tanà Ville: lany ho filoha vaovao Ramaroson Andry Heriniaina
News - Karate-Tanà Ville: lany ho filoha vaovao Ramaroson Andry Heriniaina
Tontosa ny faran’ny herinandro lasa
teo, teny amin’ny foiben’ny Komity Olympika Malagasy Ivandry, ny
fifidianana teo anivon’ny seksiona Antananarivo renivohitra,
taranja karate. Taorian’ny latsa-bato miafina nataon’ny klioba 11
manara-dalana eo anivon’ny seksiona, lany tamin’ny isam-bato 8,
Ramaroson Andry Heriniaina, avy amin’ny klioban’ny Akka. Tokana
ihany ny mpifanandrina taminy, dia Randriambololona Modeste (Aska),
nahazo isam-bato 3, izy izay filoha nitantana ny seksiona teo aloha
no izao niverina nirotsaka izao. Nambaran’ny filohan’ny
ligin’Analamanga ny Karate, Rakotomalala Jean Paul, fa nizotra
am-pilaminana sy ara-pirahalahiana ny fifidianana, tsy nisy ny
olana. Tonga nanatrika ny fifidianana teny an-toerana ny
delegem-paritra Antananarivo Renivohitra, ny teo anivon’ny
federasiona malagasy ny karate, nisoloan’ny tale teknika nasionaly
tena ary ny teo anivon’ny ligin’Analamanga, nahitana ny filoha sy
mpikambana maromaro. Taorian’ny fifidianana, niara-nifety sy
niara-paly teny Ambatomaro ny fianakaviamben’ny karate ary nanome
voninahitra izany ny filoha mpanorina ny klioban’ny Akka, i Sensei
Hugues, ity klioba ity izay nanolotra an-dRamaroson Andry
Heriniaina ho kandida.
Fitiavana Karate ny
nanosika ity filoha vaovao ity
Nambaran’ity filoha vaovao,
hitantana ny seksiona Antananarivo renivohitra ity fa ny fitiavany
ny karate ny tena nanosika azy hirotsaka hofidina, teo ihany koa ny
fahatokisana napetraky ny klioban’ny Akka taminy, mba hitondra
zava-baovao ho an’ity taranja karate ity, eo anivon’ny seksiona
tantaniny. Vonona, araka izany, Ramaroson Andry Heriniaina
hanatsara ary hampivoatra hatrany ny taranja. Vinan’asa isan’ny
goavana apetrany, ny fanomezana fitaovana isam-bolana ho an’ny
klioba mandrafitra ny seksiona. Mahakasika izay, tsy maintsy hatao
izay hampanara-dalana ireo klioba rehetra hahafahana mampivoatra ny
seksiona. Ankoatra izay, hampitomboana ihany koa ny fampiofanana sy
fizarana traikefa ireo mpikatroka hahazoana vokatra tsara hatrany.
Tsiahivina fa 25 ny isan’ny klioba anivon’ny seksiona Tanà Ville,
saingy 11 ny mbola manara-dalana.
L’article Karate-Tanà Ville: lany ho filoha vaovao Ramaroson Andry Heriniaina a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 09/02/2021
Fanadinam-panjakana Bepc :: Manana vahaolana amin’ny taranja EPS ireo mpampianatra
Notapahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny hamadihana ireo taranja ara-panatanjahantena iombonana ho an-tsoratra amin’ny fanadinana Bepc amin’ity taom-pianarana ity. Hanahirana an’ireo mpampianatra ny taranja ara-panatanjahantena na EPS anefa ny hamadika ho adina ambava ny taranja iombonana sady ahian’izy ireo rahateo ny mety tsy hisian’ny mpiadina hisafidy an’io taranja io noho izy tsy terena. Olana hafa ny tsy fahampian’ny mpampianatra manana traikefa amin’ny taranja EPS an-tsoratra. Mampahafantatra ny fananan’izy ireo vahaolana mba hisorohana an’izany tsy fisian’ny mpiadina noho ny fampiharana ny adina antsoratra izany ire o mpampianatra. “Misalasala kely ihany izahay mpampianatra taranja ara-panatanjahantena manoloana ny fanapahan-kevitry ny minisitera. Tsy manana mpampianatra manana traikefa sy fahafahana mahafehy an’izany isika. Efa tena ela ihany koa no tsy nisian’ny adina am-bava tamin’ny EPS, ka ho sarotra amin’ny ankizy ny hiverina hianatra lesona hafa indray, ankoatra an’ireo tsy maintsy hofeheziny any amin’ny taranja hafa. Ireo antony ireo no haminavinanay ny mety tsy hisian’ny mpiadina EPS amin’ny Bepc satria tsy an-tery io taranja io ”, hoy solontenan’ireo mpampianatra ara-panatanjahantena. Miantso fihaonana amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisitera izy ireo mba hiarahana mijery akaiky an’izao toe-javatra lalovan’ny adina ara-panatanjahantena noho ny hamehana ara-pahasalamana izao. Milaza ho manana ny vahaolana azo ampiharina hahafahana manatanteraka ny adina ankoatra ny am-bava mantsy ry zareo. L’article Fanadinam-panjakana Bepc :: Manana vahaolana amin’ny taranja EPS ireo mpampianatra est apparu en premier sur AoRaha.
Ankoatra ny lamandy…: mampigadra 1 hatramin’ny 5 taona ny fisalorana ankajo-miaramila
Niverina indray ny fanenjehana ireo olona manao akanjona miaramila sy/na mivarotra ireny akanjo maramara mitovy loko amin’ireo fanaon’ny mpitandro filaminana. Mampigadra 1 hatramin’ny 5 taona ny fanaovana azy ireny…Nanamafy hatrany ny eo anivon’ny fitandroana ny filaminana fa voarara sy mahavoasazy ny fivarotana sy/na fisalorana ny fanamiana mpitandro filaminana na ny akanjo mitovy loko amin’izy ireny izay tsy nahazoana alalana, araka ny andininy faha 259-n’ny fehezan-dalàna famaizana. Mahavoasazy 1 ka hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina miampy lamandy 3 hetsy Ar ka hatramin’ny 9 tapitrisa Ar izany. Toy izany koa ireny mari-boninahi-pirenena ireny (360 000 Ar ka hatramin’ny 10 800 000 Ar), araka ny voalazan’ny andininy 259, izay olona hita fa misalotra na mitondra ivelan’ny trano fonenany ankoatra ireo toe-javatra voalazan’ny fepetran-dalàna hafa, ny manontolo na ny ampahany ihany amin’ireo akanjo na fanamiana na mari-boninahitra na marika famantarana an’ny sivily na miaramila izay tsy ananany na marika famantarana fitondra na fisaloran’ireo olona manana zo hanao izany ka mahatonga fifanjevoana ao an-tsain’ny vahoaka dia faizina iray volana ka hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina sy sazy vola 3 hetsy Ar ka hatramin’ny 9 tapitrisa Ar (lalàna 78-039 tamin’ny 13.07.78). Niteraka resabe moa ity raharaha ity ka nahatonga ireo olona sasany niteny hoe rehefa hanafay ihany, tokony hofongorina ifotony any amin’ireo mpanafatra ireny akanjo ireny avy any ivelany mihitsy.J.CL’article Ankoatra ny lamandy…: mampigadra 1 hatramin’ny 5 taona ny fisalorana ankajo-miaramila a été récupéré chez Newsmada.
Jirama Toamasina: manohy ny asa fiambenany ny ProGsi
Tonga teto Toamasina ny iraky ny fitantanana foibe ny Jirama avy any Antananarivo, omaly talata, nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny orinasa ProGsi, miandraikitra ny fiambenana ny Jirama aty Toamasina. Voalaza fa antondian’izy ireo ny hanala ity orinasa ity, tsy hisahana izany fiambenana izany intsony. Nilaza ny tompon’andraikitry ny ProGsi, Rakotoniahy Josephat, fa “tsy olana amin’izy ireo ny hiala, saingy takiny ny taratasy ara-dalàna milaza izany fifanarahana arak’asa izany, saingy tsy nisy”. Nomarihiny fa “tsy mbola tapitra ny fe-potoana nifanarahany amin’ny Jirama, ary vao nohavaozina ihany koa. Tsy mbola voaloan’ny Jirama koa ny karaman’ny ProGsi, tao anatin’ny valo volana. Amin’ny maha mangarahara, tsy nisy koa ny antso tolobidy (appel d’offre) ho an’izay hiandraikitra ny fiambenana raha toa ka foanana ny fifanarahany”.Taorian’ny fihaonan’ny roa tonta, fantatra, afaka manohy ny asany ihany ny ProGsi.Hentitra amin’ny fiambenanaSarotiny ity orinasa ity amin’ny fanatanterahany ny asa. Hentitra ny fisavana ny olona mivezivezy ao anatain’ny Jirama. Maro ireo mpiasan’ny Jirama tratra nangalatra, amina tapitrisa ny tentimbidin’ny entana tratra, toy ny taribin-jiro, ny kaontera, fitaovana samihafa. Saron’ity orinasa tsy miankina ity koa ny fifanarahana hafahafa nataon’ny tompon’andraikitry ny Jirama sy ireo mpangalatra fitaovana tany Ambodilazana. Nahatratra 207 litatra ny gazoala tratran’ny mpiambina nangalarin’ny mpiasa, ny taona 2014.Sajo sy Njaka A.L’article Jirama Toamasina: manohy ny asa fiambenany ny ProGsi a été récupéré chez Newsmada.
Misy ny drafitrasa iadiana amin’ny tohitra ody ainabitika: olona 700 000 maty noho ny tsy fahombiazan’ny fanafody
Anisan’ny antony mitarika ny tsy fandairan’ny fanafody ampiasaina amin’ny aretina azo avy amin’ny otrikaretina ny fampiasana karazana fanafody tsy araka ny tokony ho izy, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra voalohany ao amin’ny HJRB, ny profesora Randria Mamy, teny Anosy. Ohatra amin’izany ny antibiotika hohanin’ny olona marary iray tsy avy amin’ny mpitsabo fa manao dokotera tena ao an-trano. Mety tsy ho ampy ny fatra sy ny faharetan’ny fihinanana izany ka lasa tsy mandaitra amin’ny vatan’ilay olona intsony. Misy koa ny karazan’aretina (toy ny gripa…) tsy ilaina akory ny fampiasana antibiotika.Ampiasain’ny mpiompy sasany hitsaboana na hanatavezana ny biby fiompy ny antibiotika ka mifindra amin’ny hena. Aty aoriana, lasa manao fanoherana ilay fanafody nomena ny biby fiompy ny olona mihinana ilay hena voapoizina.Tokony hanatona mpitsabo Eo koa ny fanafody tsy manaraka ny fenitra amidy eny rehetra ireny ka mitera-doza ho an’izay mampiasa azy ary ireo fampiasana fanafody famonoana bibikely amin’ny voly sy ny biby fiompy. Rehefa tsy mandaitra intsony ny fanafody hitsaboana ny aretina iray satria manao fanoherana ny vatan’ilay marary, mety hitarika amin’ny fahafatesana. Isan-taona, 700 000 maneran-tany ny olona mamoy ny ainy noho ny tohitra ody ainabitika ary tombanana ho tafakatra 10 tapitrisa ny tarehimarika ny taona 2050, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, profesora Rakotonirina Julio. Napetraka ny vovonana ahitana ny teknisianina avy amin’ny minisitera voakasika (fahasalamana, fambolena ary ny tontolo iainana) sy ny mpanohana teknika (OMS, FAO) hanantanteraka ny drafitrasam-pirenena iadiana amin’ny tohitra ody ainabitika. 13 tapitrisa dolara mahery ny sorabola hatokana hanaovana ny asa hatramin’ny taona 2023. Ezaka lehibe ny fanaraha-maso ny fivarotana fanafody tsy manaraka ny fenitra sy ny fanentanana ny mponina tsy hihinana fanafody raha tsy nahazo toromarika avy any amin’ny mpitsabo. Natao teny Anosy ny fanokafana ireo dingana hoentina hiady amin’ny tohitra ody ainabitika.Vonjy A. L’article Misy ny drafitrasa iadiana amin’ny tohitra ody ainabitika: olona 700 000 maty noho ny tsy fahombiazan’ny fanafody a été récupéré chez Newsmada.
Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa : nifampidinika ny mpianatra sy ny tomponandraikitra
“Vatsim-pianarana dimy volana no notakinay ka tsy mahafa-po ny telo volana nambaran’ny minisitera fa haloa ary efa namoahana tetiandro”, hoy ny mpitarika ny hetsika fitakiana ao amin’ ny oniversiten’i Fianaran­tsoa, ny alakamisy hariva teo. Niantso ny mpianatra hanohy ny fihetsiketsehana noho izany izy ireo eny amin’ ny kianjan’ny serasera, omaly. Hanomboka amin’ny alarobia ho avy izao ny fizarana ny vatsim-pianarana ka haharitra hateloana. Araka ny vaovao azo, naato aloha ny fanohizana ny fitakiana saika hatao omaly fa nisy fivoriana niarahan’ny mpitandro filaminana sy ny prefet ary ny solontenan’ny mpianatra ary ny solontenam-panjakana ao an-toerana. Nanamarika koa ny mpianatra fa tsy toromarika avy amin’ izy ireo mihitsy ny fandorana fananan’olona sy fanimbana fananana iombonana ka to­kony ho mailo ny mpianatra. Etsy an-daniny, nanao fanambarana ny minisiteran’ ny Fampianarana ambony tamin’ny alalan’ny minisitra taorian’ny zava-niseho tany amin’ny oniversite’i Toliara ka namoizana aina sy naharavana fananana. Maname­loka ny herisetra sy ny fa­nao­vana fitaovana ny mpianatra ho fanakorontanana ny firenena ny minisitera mpiahy.Vonjy A.L’article Oniversiten’Andrainjato Fianarantsoa : nifampidinika ny mpianatra sy ny tomponandraikitra a été récupéré chez Newsmada.
Naharitra ora vitsivitsy vao tafavoaka ireo razana: mpanao lalana roa maty tototry ny tany, telo hafa naratra
Nihotsaka tampoka ny faritry ny toerana niasan’izy ireo, ka maty tototry ny tany vokatr’izany ireto mpiasa mpanao lalana roalahy tany Ankazondandy (RN 3). Nisy telo hafa kosa avotra ihany saingy naratra mafy, ankoatra ny lehilahy iray main’ny taribin-jiroTsy mampilaza ny loza. Lehilahy roa 20 sy 22 taona indray namoy ny ainy, ny asabotsy hariva teo tao Fieferana-Ankazondandy, distrikan’i Manjakandriana. Maty nihotsahan’ny tany ireo mpiasan’ny orinasa tsy miankina iray manodidina ny tamin’ny 05 ora latsaka fahefany. Naman’ireo tra-doza telo hafa kosa naratra tamin’izany, olona iray hafa ihany koa main’ny herinaratra ka tsy nahatsiaro tena. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa mpanao lalana ireo niasa teny an-toerana, manodidina ny 10 eo ny vatan-dehilahy nanao izany, hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. « Nangady tany izy ireo tamin’io fotoana io ary tsy lavitra teo, nisy andrin-jiron’ny Jirama izay tsy tokony hokitihina », hoy ny zandary. Mbola nangady ny tany anefa ireo mpiasa teny an-toerana. Vokany, nianjera tampoka ilay andrin-jiro ka niteraka fihotsahan’ny tany. Tototra teo no ho eo ny dimy lahy tamin’izany. Taorian’izay, nifanome tanana ny fokonolona sy ny zandary ary ireo tompon’andraikitra samihafa teo an-toerana tamin’ny fitadiavana ireo tra-doza. 30 minitra taorian’izay, tafavoaka ny vata-mangatsiaka iray voalohany. Raha naharitra ora iray kosa ny fahitana ny faharoa hafa. Izay tsy hita raha tsy efa maizina ny andro, hoy hatrany ny loharanom-baovao.Tsy nahatsiaro tenaNandritra izay, lehilahy telo hafa naratra. Voalaza kosa fa naratra mafy ny iray tamin’izy ireo ary efa nalefa vonjimaika eny amin’ny HJRA avokoa. Tamin’ireo fokonolona nitangorona kosa, nisy lehilahy iray nahitsaka taribin’ilay andrin-jiro ka main’ny herinaratra ary tsy nahatsiaro tena vokatr’izay. « Ireny tariby mitondra herinaratra mahery vaika ireny mihitsy ilay voahitsany tamin’io fotoana io », hoy hatrany ny zandary. Taorian’ny famonjena azy, velona soa aman-tsara ralehilahy ka tsy hatahorana ny ainy.Hatramin’ny ora nanoratanay farany, tsy mbola nitohy ny asa teny an-toerana. Ireo vata-mangatsiaka kosa efa any amin’ny fianakaviany avy. Henintsoa HaniL’article Naharitra ora vitsivitsy vao tafavoaka ireo razana: mpanao lalana roa maty tototry ny tany, telo hafa naratra a été récupéré chez Newsmada.
Firongatry ny valanaretina: fito ireo lavon’ny Covid-19
Niakatra tampoka indray. Miisa fito ireo lavon’ny Coronavirus, omaly. Avy eto Analamanga ny efatra amin’ireo namoy ny ainy raha avy any Atsimo Andrefana ny roa ary iray kosa avy any Diana. Mitovy amin’izao ny antontanisan’ireo maty ny alahady teo. Miisa fito koa tao anatin’ny iray andro raha miisa 10 kosa izany ny 17 jolay teo.Anisan’ny taha ambony indrindra amin’ireo maty tao anatin’ny iray andro ireo. Tafakatra 134 izany izao ireo namoy ny ainy hatramin’izao.Etsy andaniny, miisa 304 ireo nifindran’ny valanaretina ka avy eto Analamanga avokoa ny 242 amin’izany. Manaraka akaiky eo ny any Alaotra Mangoro, miisa 26. Mitsinjara ho 12 ny any Ambatondrazaka, Moramanga ny 10, Amparafaravola ny efatra raha 10 ny any Boeny. Sivy kosa ny any Matsiatra Ambony. Telo avy ireo nifindran’ny valanaretina any Atsimo Andrefana, any Menabe ary any Itasy. Roa avy ireo any Bongolava sy any Sava. Samy iray ireo tranga vaovao tany Analanjirofo sy any Atsinanana.Ho an’ny «forme grave» kosa, miisa 88 izy ireo ka mbola maro anisa amin’izany ny eto Analamanga. Miisa 69 izany ary mitsinjara ho 41 ny etsy Befelatanana, 11 ny eny amin’ny HJRA. Miisa 12 ireo marary mafy eny Anosiala raha efatra ny eny Fenoarivo ary iray kosa ny etsy amin’ny Homi, Soavinandriana. Any amin’ny faritra kosa ny 19 ambiny.Ankoatra izany, miisa 350 ireo sitrana ka tafakatra 10 148 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 12 526 kosa ireo nifindran’ny valanaretina hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty raha 2 244 ireo mbola manaraka fitsaboana.Miisa 46 301 ireo fitiliana PCR vita raha miisa 3 323 kosa ny fitiliana tamin’ny « Genexpert ».Synèse R.L’article Firongatry ny valanaretina: fito ireo lavon’ny Covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
« Kred » – BNI: famatsiam-bola ho an’ny PME
Nampahafantarina, omaly, ny tolotra vaovao « Kred » ao amin’ny BNI Madagascar, hiadiana indrindra amin’ny lalam-pihariana tsy manara-dalàna na « informels ». Raha ny voalazan’ny filohan’ny filankevi-pitantanan’ny BNI, Rabarijaona Henri, « mahatratra 2,2 tapitrisa ny fitadiavam-bola “informels” miainga avy amin’ny olon-tokana, tsy ao anatin’izany ny sehatry ny fambolena. 177 000 fotsiny ny “formels”, raha ny miainga avy amin’ny olon-tokana ihany. Hita amin’izany fa be loatra ny elanelana amin’ireo “informels” sy “formels” ireo, anatin’ny sokajin’ny orinasa tena madinika, madinika sy salantsalany ka mamono antoka ny fanjakana ».Koa natao izao ny tolotra « Kred » hanamorana ny fahazoana famatsiam-bola, tsy mila manatona biraon’ny BNI intsony fa vitan’ny teknolojian’ny fifandraisana. Kendrena ny hanafainganana izany ho an’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME) sy ho an’ny olon-tsotra, tolotra voalohany eto Madagasikara. Fomba fanafainganana izay tolotra izay ny fahitana mpiasan’ny BNI manatona ny mpanjifa, manangona ny tetikasany sy ny fangatahana avy amin’izy ireo. Misy komity ao amin’ny banky mijery sy manitsy ny fanatanterahana izany. Alefa amin’ny alalan’ny finday ihany ny valiny sy ny famatsiam-bola.Nohamafisin’ny tale jeneraly, i Alexandre Mey, ny maha « banque digitale » ny BNI: tsy mandany fotoana sy manafaingana ny fandraharahana ho an’ny PME. Miara-miombon’antoka amin’ny fanjakana ny BNI mahakasika ny fandaharanasa « Fihariana », hampirisika ny tanora hamorona asa.Nanatrika ny fotoana ny minisitry ny Vola sy ny toekarena, Randriamandrato Richard, sy ny minisitry ny Indostria, ny varotra sy ny asa tanana, Rakotomalala Lantosoa ; nanotrona azy ireo ny avy ao amin’ny Commission de supervision bancaire et financière (CSBF) sy ny mpiandraikitra ny fandaharanasa « Fihariana ». Ho hita eo rehefa hanaovana tomban’ezaka ny PME eto amin’ny firenena. R.MathieuL’article « Kred » – BNI: famatsiam-bola ho an’ny PME a été récupéré chez Newsmada.
Ranesa Firiana: “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo”
Hatramin’izao, tsy mbola misy tomponandraiki-panjakana ambony tsaraina noho ny fandikan-dalàna nataony. “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo”, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana. “Ny tokony hatao amin’izao, mila hamaivanina ny paikady fampihatra manoloana ny Fitsarana avo. Tsy tokony hatahotra handalo rantsam-pitsarana ny tomponandraiki-panjakana, raha madio tamin’ny asany sy ny fomba fiasany tamin’ny fitantanana ny firenena izy.” Io no fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana, momba ny fahasarotan’ny fitsarana tomponandraikitra ambony amin’ny Fitsarana avo (HCJ). Raha ny lalàna amin’izao, toy hoe hasarotina ny fanenjehana olona iray eo anivon’ny HCJ mba tsy hahazoana manenjika na manasazy azy noho ny heloka vitany.Nefa milaza ny lalàmpanorenana fa eo ambany lalàna avokoa ny tsirairay, raha misy fahadisoana ataony. Na mpitondra izy, na olom-pirenena tsotra: tokony hisy sazy mifanaraka amin’izay fahadisoany. Maro ireo tomponandraiki-panjakana teo aloha no fantatra fa nanao hadisoana, nefa lasa tsy azo enjehina na miandry ny fijoroan’ny Antenimierampirenena ny fahazoana manenjika azy ireo.Misy ny soso-kevitra azo atolotraMba hanamora sy hahazoana mitsara ireo tomponandraiki-panjakana teo aloha na amin’izao fotoana izao, misy andininy tokony hohavaozina amin’ny lalàna momba ny HCJ. Tokony hokitihina, ohatra, ny hoe: ny Antenimiera no manao ny fanenjehana. Eo amin’ny fisaraham-pahefana, tsy tokony ho ny mpanao lalàna no manao ny fanenjehana fa ny mpitsara.Toy izany ny momba ny fanadihadiana: inona ny fepetra hanaovana famotorana, iza no tokony hanenjika amin’izay fotoana izay? Na ny fitoriana koa aza, mila jerena. Tokony hanan-jo hanenjika ireo olona manao fahadisoana ny olom-pirenena.Nefa na manao fampahafantarana aza ny olom-pirenena: tsy maintsy mandalo any amin’ny rantsa-mangaika samihafa ny fankatoavana izay hoe tokony hoenjehina ny mpitondra teo aloha na ny amin’izao fotoana izao. Nefa lasa tsy azo atao izay, satria tsy mametraka an’izay ny lalàna.Mila fanatsarana ny lalànaTolo-kevitra iray hanatsara ny lalàna momba ny HCJ, raha mbola eo amin’ny fitantanana ilay tomponandraiki-panjakana ambony, mba tsy hanahirana ny fampandehanan-draharaham-panjakana: azo ekena ny hoe ny HCJ no manenjika sy mitsara azy. Raha tsy eo amin’ny andraikiny intsony izy fa nahavita ny asany amin’ny maha minisitra, na praiminisitra, na filohan’ny Repoblika, filohan’andrimpanjakana: tokony hiverina avy hatrany any amin’ny fitsarana tsotra ny fanadihadiana sy ny fanenjehana rehetra momba azy.Amin’izao fotoana izao, misy tomponandraiki-panjakana teo aloha tafiditra tao anatin’ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana: voaenjika ny olona nampiasaina, fa izy tsy voaenjika. Misy mizana tsindrin’ila izany. Mety misy fanatsarana azo atao mety ho tsotsotra ny lalàna momba ny HCJ, nefa mametraka ny tsirairay ho eo ambany lalàna.R.Nd.L’article Ranesa Firiana: “Mila hamaivanina ny paikady amin’ny Fitsarana avo” a été récupéré chez Newsmada.
Fampiasana « carte de santé » hosoka: mpianatrasa iray efa nahazo hatramin’ny 10 tapitrisa Ar
Tra-tehaky ny polisim-pirenena, ny zoma maraina teo ireo lehilahy roa mpanao taratasy hosoka mahakasika “carte de santé” an’ireo mpiasa amina orinasa iray. Ny iray amin’ireo jiolahy izay mpianatrasa ho farmasianina raha mpiray tendro aminy kosa ny lehilahy iray hafa. Efa nahtratra 10 tapitrisa Ar ireo ny vidim-panafodin’ilay orinasa lasan’ireo jiolahy ary efa fanaony mihitsy izany noho ireo fanafody amidiny amin’ny vidiny mora.Mampiasa “carte de santé » hosoka amin’ny anarana orinasa iray ireo jiolahy. Orinasa izay miantoka ireo olona mpikambana ao aminy ka hahafahan’ireo marary tsy mandoa vidim-panafody. Araka izany, tsy maintsy manana « carte assurance » ireo mpikambana ka io karatra io no nataon’ireo lehilahy ireo hosoka amin’ny « ordonnace » hosoka misy ny tombokase hosoka ana dokotera ihany koa. Taty aoriana, tsikaritr’ilay orinasa fa misy mampiasa karatra hosoka amin’ny anaran’izy ireo, toy izany koa ireo taratasim-panafody izay tsy mifanaraka velively ao aminy ka nahatongan’ilay orinasa nametraka fitoriana teny amin’ny Service central des affaires réservées. Vokany, voasambotra teny Ambohibao, tao amina fivarotam-panafody teny an-toerana ny lehilahy iray.Henintsoa HaniL’article Fampiasana « carte de santé » hosoka: mpianatrasa iray efa nahazo hatramin’ny 10 tapitrisa Ar a été récupéré chez Newsmada.